လူတိုင်းအတွက် Facebook Messenger မှာစာတွေကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
လူတိုင်းအတွက် Facebook Messenger မှာစာတွေကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
Ignacio Sala | | Facebook က
အကယ်စင်စစ်သင်၏အသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်, သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်သောအရာတို့ကိုပြောပြီ မင်းနောင်တရတယ်။ တကယ့်ဘဝ၌ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမဖျက်နိူင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရွေးနုတ်နိုင်သည်။ သို့သော် WhatsApp သည်သုံးစွဲသူအရေအတွက်အားဖြင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာဘုရင်ဖြစ်သော်လည်းနိုင်ငံအားလုံးတွင် messaging application များမှတဆင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Facebook သုံးစွဲသူများသည် Messenger (Facebook ၏ messaging platform) နှင့် WhatsApp ကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအတူတူထီးအောက်မှာတွေ့တဲ့အခါ၊ သူတို့အတူတူအလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရသည်ဝမ်းနည်းစရာကမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။
1 Messenger ထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများ encryption
2 Messenger ထဲတွင်စာများကိုဖျက်ပါ
3 Android မှာ Messenger မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ရန်
4 iPhone ပေါ်ရှိ Messenger စာများကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
5 PC / Mac ပေါ်ရှိ Messenger စာများကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
6 Messenger ကိုပြောဆိုမှုများကိုဖျက်ပစ်နည်း
7 Messenger ထဲမှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာ
Messenger ထဲတွင်မက်ဆေ့ခ်ျများ encryption
WhatsApp သည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအသုံးပြုသည် (မက်ဆေ့ခ်ျကိုပို့သောအခါစာဝှက်ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိသူမှအလိုအလျောက်စာဝှက်မည်။ ) စကားဝိုင်းများတွင်၎င်းတို့ကိုသုံးစွဲသူများ၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သာဆာဗာများပေါ်တွင်မိတ္တူမသိမ်းဘဲသိမ်းဆည်းထားသည်။
Messenger Telegram ကဲ့သို့စာတိုများကိုစာဝှက်ပါသို့သော်၊ encryption သည်အဆုံးသို့မရောက်ပါ။ စာများကိုစာဝှက်ရန်သော့များကိုကုမ္ပဏီဆာဗာများပေါ်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Messenger သည် Telegram ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းကိုမဖွင့်ဘဲကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှအဆင်ပြေစွာစကားပြောရန်ခွင့်ပြုသည်။
WhatsApp ကိုအပေါ်နေစဉ် ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိုက်သောစာများကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အချိန်အကန့်အသတ်ရှိသည်Messenger မှာ Telegram လိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအကန့်အသတ်မရှိ၊ မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပြီးမဖတ်သည်ဖြစ်စေ၊ သို့သော် Mark Zuckerberg ၏ပလက်ဖောင်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းနှစ်မျိုးကိုပေးထားသည်။ ၎င်းသည် function ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးအသုံးပြုသူအားရှုပ်ထွေးစေသည် - Delete message and Cancel message ။
Messenger ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး ၁၀ မိနစ်အတွင်းမှာကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည် ငါတို့အဘို့နှင့်အခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းများအတွက်နှစ် ဦး စလုံးမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ပါ။ အကယ်၍ ၁၀ မိနစ်ကျော်ပြီးသွားပါက၊ ထိုမက်ဆေ့ခ်ျသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်မှသာလျှင်အခြားသူများပါဝင်သည့် chat မှမဟုတ်ဘဲပယ်ဖျက်လိမ့်မည်။
Messenger ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုထားသည့်အခြားရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာဤအချိန်တွင် Messenger မှစာများသည် Cancel message ဖြစ်သည်။ ဒီစပ်စုသောအမည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့သည် တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသော function ကို ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးကတည်းကပြီးသွားတဲ့အချိန်ကိုပဲ Messenger ကတဆင့်ပို့လိုက်တာပါ။
Android မှာ Messenger မက်ဆေ့ခ်ျကိုဖျက်ပစ်ရန်
Android အတွက် Messenger အက်ပလီကေးရှင်းရှိမက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်သိမ်းရန် (သို့) ဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမည် ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ထားပါ။
ပြီးရင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ကိုဖယ်ရှား အမှိုက်ပုံးတစ်ခုကကိုယ်စားပြုသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမယ် ငါတို့လိုချင်သော option ကိုရွေးပါ:
ကျွန်တော့်ကိုဖျက်ပါ (ရေးသားပြီးကတည်းက ၁၀ မိနစ်ကျော်ကျော်လွန်လျှင်ရွေးချယ်မှုကိုပြသသည်) / အားလုံးကိုဖျက်ရန် (၁၀ မိနစ်သာရေးသားခဲ့ပြီးပါက)
iPhone ပေါ်ရှိ Messenger စာများကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
iPhone ပေါ်ရှိ Messenger မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖျက်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်လက်တွေ့ကျသည် Android မှာအတူတူပါပဲ.
လျှောက်လွှာကိုဖွင့်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဖျက်လိုသောစာကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင် ကျနော်တို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုဆင်းကိုင်ထားပါ ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူမီနူးအောက်ခြေမှာပေါ်လာသည်အထိ။
ထိုအခါ နောက်ထပ်ကိုနှိပ်ပါ နောက်ပြီး Delete option ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်၎င်းသည်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်။
ကျွန်တော့်ကိုဖျက်ပါ (ရေးပြီးကတည်းက ၁၀ မိနစ်ထက်ကျော်လွန်လျှင်ဒီရွေးစရာကိုပြသည်) / အားလုံးကိုဖျက်ရန် (၁၀ မိနစ်သာရေးသားခဲ့ပြီးပါက)
ထိုအ option ကို တင်ပို့မှုကိုရပ်ပါ.
PC / Mac ပေါ်ရှိ Messenger စာများကိုမည်သို့ဖျက်ရမည်နည်း
Messenger ကို PC နှင့် MacOS နှစ်ခုလုံးအတွက် Facebook ၏ကိုယ်ပိုင် application မှရရှိသည်။ ၎င်းသည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု ၅၀ အထိပါ ၀ င်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုများကိုဆက်လက်။
မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျက်လိုသောစာကို mouse ပေါ်တွင်တင်ရမည်။ ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ မောက်စ်ကိုရွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောရွေးစရာကိုရွေးချယ်ပါ - တင်ပို့ခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်အတွက်ဖျက်ပါ။
သငျသညျလိုလျှင် စကားပြောဆိုမှုကိုလုံးဝဖျက်ပစ်ပါ Messenger မှတစ်ဆင့်သင်ထိန်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတာငါအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ပယ်ဖျက်လိုသောစကားဝိုင်းပေါ်တွင်လက်ချောင်းကိုဖိ။ ကိုင်ထားရမည်။
ထို့နောက် Delete option ကိုရွေးချယ်ရန် drop-down menu ကိုပြလိမ့်မည်။
ဤရွေးချယ်မှုသည်စကားပြောဆိုမှုကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပစ်ရန်ပါ ၀ င်သည် ငါတို့ဘယ်တော့မှပြန်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့အားအဓိကမျက်နှာပြင်တွင်နှောင့်ယှက်နေသော chats များကို archive လုပ်ရန်ခွင့်ပြုထားသည့် WhatsApp နှင့်မတူဘဲ (နောက်မှပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုသည်), Messenger တွင်ဤဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါ။
messenger ကို ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးထားပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန် ထိန်းချုပ်ထားသည် အချိန်အခါမရွေး Temporary Mode နှင့် Secret Conversations လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့်။
ယာယီ mode သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလိုအလျောက်ဂရုစိုက်သောစကားလက်ဆုံပြောဆိုခွင့်ကိုခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုမှထွက်ခွာသောအခါတစ်ချိန်ကဖတ်ထားသောစာများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။ ဤရွေးချယ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းစကားကိုအခြားလူများနှင့်မစွန့်လွှတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ပို့သောစာကိုဖတ်ပြီးသည့်အခါဖတ်ရှုပြီးကြောင်းနှင့်ထိုသတင်းစကားကိုပြသသည့်အပြာအတည်ပြုချက်စစ်ဆေးမှုကိုပြလိမ့်မည် အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည် သငျသညျစကားပြောဆိုမှုစွန့်ခွာသောအခါ။
ယာယီ mode ကိုရရှိနိုင်ပါသည် ကျနော်တို့ဖန်တီးသောစကားပြောဆိုမှုရွေးချယ်စရာအတွင်း။ ၎င်းသည်စကားဝိုင်းအသစ်များအတွက်သာရရှိပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုအခြားချတ်များနှင့်မတူရန်အနက်ရောင်ဖြင့် interface ကိုပြသသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, တစ်စုံတစ် ဦး ကဖန်သားပြင်ကိုယူသို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်လျှင်ကျနော်တို့အသိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
လျှို့ဝှက်စကားပြောဆိုမှုများသည် WhatsApp ကဲ့သို့ပင်အလုပ်လုပ်သည်။ အဆုံးမှအဆုံးသို့စကားဝှက်များကို encrypt လုပ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းမှသာ PC သို့မဟုတ် Mac ဗားရှင်းများမှရရှိနိုင်သည်။
ဒီ option ငါတို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူနှစ် ဦး စလုံးက activated ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပယ်ဖျက်သည်အထိပေးပို့လိုက်သောမက်ဆေ့ခ်ျမှဖတ်ရမည့်အချိန်ကိုဖော်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်။ ဖျက်သိမ်းချိန်သည် ၅ စက္ကန့်၊ ၁၀ စက္ကန့်၊ စက္ကန့် ၃၀၊ ၁ မိနစ်၊ ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်၊ မိနစ် ၃၀၊ ၁ နာရီ၊ ၆ နာရီ၊ ၁၂ နာရီနှင့်တစ်ရက်ဖြစ်သည်။
ဤအချိန်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် စာသားအကွက်၏ရှေ့မှောက်၌ပြသသည့်နာရီကိုနှိပ်ပါ။ သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်မက်ဆေ့ခ်ျအားလုံးအတွက်အတူတူဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ကြာကြာနေလိုသောမက်ဆေ့ခ်ျများအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
တစ်ချိန်ကဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြသထားသည့်အချိန်, ဒါကငါတို့ကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်တယ်, ဒါကြောင့်ပြီးတာနဲ့စာသားအစားပြသပါလိမ့်မယ် ဤစာသည်သင့်အတွက်သက်တမ်းကုန်သွားပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » social networking » Facebook က » လူတိုင်းအတွက် Facebook Messenger မှာစာတွေကိုဘယ်လိုဖျက်မလဲ
မှတ်ပုံတင်စရာမလိုပဲ Twitter သို့ဘယ်လို ၀ င်ရမလဲ
ဤရိုးရှင်းသောပရိုဂရမ်များဖြင့်သင်၏ PC တွင်အိုင်ဖုန်းတစ်ခုကိုမည်သို့တုပရမည်နည်း